နန်းလေပြေနု: June 2010
ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ ကျွန်မ ဟန်မဆောင်တော့ပါ။
“ အိုး နင်တောင် ပြောင်းလဲသွားသေးတာ ငါက ဒီအတိုင်းလေးပဲ ကျန်မယ်လို့ နင် ဘာလို့မျှော်လင့်နေရတာလဲ”
“အချစ်အကြောင်းကို စဉ်းစားရင်း အချိန်ကုန်နေရအောင် ငါ ကလေး မဟုတ်တော့ဘူး ကိုကို ငါ့မှာ ဆက်လျှောက် ရမယ့် လမ်းတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်”
“နင် လက်ထပ်ခြင်း လက်မထပ်ခြင်းအပေါ်မှာ ငါက ဘာလို့ မိန်းမူးနေရမလဲ ဒါ နင့်ဘ၀လေ ငါ့ဘ၀မှ မဟုတ်တာ နင့်ဘ၀ နင့်လမ်း နင်လျှောက်တာ ငါက ဘာဆိုငိလို့ ခံစားနေမလဲ နင်နဲ့ငါ ချစ်ခဲ့ကြတယ် မှန်တယ် ဒါပေမယ့် ချစ်တိုင်း လက်ထပ်ဖြစ်တာမှ မဟုတ်တာ ငါ့ကို အဲလောက် နင် လျှော့မတွက်သင့်ဘူး ကိုကို”
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်စနစ်နဲ့ အညီ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေက နောက်က တစ်ပါတည်း လိုက်လာတက်တာလဲ လောကရဲ့ သဘာဝပေါ့။ အရာရာကို စမ်းသပ်စွန့်စားချင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တွေ..... နည်းပညာမြင့် မီဒီယာတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးသိမ်းသွင်းမှုအောက်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရောက်လာနေပြီ။ လမ်းကြောင်းမှန်ကို ရောက်သွားတဲ့ ကလေးတွေ ရှိပေမယ့် ရေလိုက်လွဲတဲ့ ကလေးတွေ အများကြီးပါ။ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်နေ၊ ကြားနေရတာတွေလဲ လခြား၊ ရက်ခြားကနေ ခု နာရီလောက်ပဲ ခြားပါတော့တယ်။ အတုမြင် အတက်သင်ဆိုတာ ကလေးတွေအတွက် အများကြီး အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိဘရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်ကနေ လွတ်ပြီး အဆောင်နေ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ လူငယ်၊ လူရွယ်တွေမှာ ပိုလို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျောင်းသားအရွယ်၊ လူငယ်ဆိုတာ ပျော်ချင်တယ်၊ ပါးချင်တယ်၊ လွတ်လပ်ချင်တယ်.... ဒါ သဘာဝပဲ။ ဒါပေမယ့် အရာရာတိုင်းမှာ အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ လိုအပ်တာထက် ပိုလာရင်တော့ ဒါဟာ အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းပဲ။
“ကျွန်တော်/ကျွန်မကတော့ လိမ်တာကို အမုန်းဆုံးပဲ”
လက်တွေ့ဘ၀မှာ မဆိုစလောက်ကတော့ လိမ်ဖြစ်နေကြတုန်း....
တတိယတစ်ခါက လိမ်ထားတာ မပေါ်ရုံ......
လိမ်တာက လိမ်တာ မဟုတ်တော့သလို ထမင်းစား ရေသောက် ကျူးလွန်နေကြတာများ မှန်တဲ့သူက လူမိုက်ကြီးလုံးလုံးကို ဖြစ်လို့............။ ။
ပလပ်စတစ်(ကလေကချေ) Read more »
“လာကွာ ဘူတာကြီးရောက်တုန်း အာဆင်နယ်မှာ ထမင်းကြော်သွားစားကြရအောင်”။ ပခုက္ကူကို ပြန်မယ့် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်မိုးနဲ့ ကိုသက်ကြီးတို့ကို လိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာ ကိုစောကြီးက ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စကားဆုံးတာနဲ့ 78 လမ်းကို ဖြတ်ဆင်းကာ 77 လမ်း 31 နဲ့ 32 ကြားမှာ ရှိတဲ့ အာဆင်နယ် ထမင်းကြော်ဆိုင်လေးဆီကို မီးမီးတို့ အဖွဲ့ ချီတက် လာကြသည်။
ကိုစောကြီး။ သူက နောက်ပြောင် ပျော်ရွှင်တတ်သောသူ..။ သူမို့ ကျောင်းခန်းထဲမှာ ရှိလျှင် အတန်းသူ အတန်းသားမှန်သမျှ ပါးစပ်မစေ့ရအောင်ပင် တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ရယ်စရာတွေ ပြောနေတတ်သည်။ အသံအကျယ်ကြီးနှင့် လူအမြင်ကပ်အောင် ရယ်တတ်သောသူလဲ ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာပုံစံဖမ်းကာ လွယ်အိတ်အစုတ်ကြီးအား မပြတ်တမ်းလွယ်ကာ “စော်က ၀ယ်ပေးထား တာကွ” ဟု မဟုတ်ပဲ ပြောလေ့ရှိသောသူပင်။
ကိုဇော်မိုး။ အမှန်အကန်သမားဟု နာမည်ပြောင်ပေးရလောက်အောင် ကန်ပစ်ချင်လောက်အောင် မှန်သောသူ ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ကြီးသမား ဖြစ်ကာ လှေနံဓါးထစ် တစ်ယူသန်ကာ စိတ်ဆက် ဒေါသထွက်လွယ်သောသူ။ မာနကြီးကာ စကားတစ်ခွန်းပင် အမှားမခံသော၊ ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ လင်္ကာဒီပချစ်သူ စာအုပ်ကို အကြိုက်ဖတ်ကာ အကောင်းဆုံး အဆိုတော်သည် မာမာအေးဖြစ်သည်ဟု လက်ခံထားကာ အရာရာမှာ အငြင်းသန်သောသူ။
စိတ်ညစ်စရာ၊ လွမ်းစရာ၊ ဆွေးစရာ၊ သတိရစရာတို့မှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တက်သော လူ့သဘာဝကို ဆန်ကျင့်စွာပင် နန်းနုသည် သတိရစရာများနှင့် ပြည့်နှက်နေသော ထို့မြို့လေးဆီသို့ ရူးမိုက်စွာ တိုးဝင်သွားခဲ့သည်။ မြို့ပြရဲ့အငွေ့အသက် တို့ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါးကာ တောင်ပေါ်မြို့လေးတို့၏ အစဉ်အလာအတိုင်း အေးမြသောရာသီဥတုနှင့် ပန်းတွေဝေဆာ နေတဲ့ ဒီမြို့လေးကို နန်းနု တော်တော်လေး နှစ်သက်ပါသည်။
ကားပြတင်းပေါက်မှတဆင့် တိုးသက်လာတဲ့ လေတို့ကြောင့် အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီကို တစ်ချက်တင်းတင်း ဆွဲစေ့လိုက်သည်။ မြို့ဝင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုတောင် လှမ်းမြင်နေရပြီပဲ။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ 11း20။ “အင်း နေ့လည်စာကိုတော့ တစ် ယောက်တည်း စားရဦးတော့မှာပဲ” ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့ အူကြောင်ကြောင်အတွေးကြောင့်နန်းနု ပြုံးလိုက်မိသည်။ ဟုတ်ပါရဲ့.. တစ်ယောက်တည်းစားနေရတာက အမြဲတမ်းလိုလိုပဲဥစ္စာ ဘယ်မှာဆန်းလို့လဲ။ စားပွဲထိပ်မှာ ထိုင်ပြီး တင် ထားသော ထမင်းပန်းကန်၊ ဟင်းပန်းကန်တို့ကို စိတ်မသက်မသာနဲ့ ကြည့်ရင်း မျက်မှောင်ကြုတ်ကာ ရေနဲ့မျှောချခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေ. နေ့တွေ..နှစ်ပြည့်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့။
ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ အမှားမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဘယ်သူပြောရဲခဲ့သလဲ?
လူအဖြစ် မွေးဖွားလာတာကိုက သဘာဝတရားကြီးရဲ့ သဘာဝကျကျ အလွဲတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့တော့လည်း.. အားလုံးဟာ အမှားအယွင်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်းရှင်သန်လာရတာ ဆန်းတယ်လို့ မပြောသာဘူးပေါ့။မှတ်မိသလောက် ပြန်တွေးကြည့်ကြရင် မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေဟာ… အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက် ရှိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ လေထုရဲ့ ပမာဏထက်တောင် များနေကြမယ် ထင်တယ်။မှားခဲ့ကြတဲ့ အမှားတွေထဲမှာ…… မှားမှန်းမသိ မှားခဲ့တာတွေ….. မှားမှန်းသိသိနဲ့ မှားခဲ့တာတွေ… မမှားဘဲ မနေနိုင်လို့ မှားခဲ့တာတွေ…. မမှားချင်ပဲ မှားခဲ့ရတာတွေ………… မှားနည်းပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ မှားခဲ့ကြဖူးတယ်...။ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ အမှားမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဘယ်သူပြောရဲခဲ့သလဲ?”အမှားလုပ်ခဲ့ဖူးတာ အပြစ်မဟုတ်ဘူး…….. မှားတာကို သိရက်နဲ့ အမှန်ကို မပြင်နိုင်တာကသာ အပြစ်” လို့ ယူဆတယ်...။”အပြစ်လုပ်ပြီးမှ တောင်းပန်တာကို မလိုချင်ဘူး အပြစ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်မလာတာကိုပဲ လိုချင်တယ်” လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဖခင်ကြီး မဟတ္တမ္မ ဂန္ဒီက ပြောခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။ တောင်းပန်စကားဆိုတာက အမှားလုပ်မိတဲ့ သူတိုင်း ဆိုသင့်တဲ့ စကားဆိုတာမှန်ပေမယ့်.. လူတိုင်းဟာ တောင်းပန်စကားကြားချင်တာထက် အဲဒီအဖြစ်လေး ဖြစ်မလာခဲ့တာပဲ ကောင်းမယ်လို့ တွေးတက်ကြတယ်။ အဲလိုတွေးတက်ရင် ......... ကိုယ်တိုင်လဲ တောင်းပန်စကား ပြောဖို့ထက် တောင်းပန်စကားဆိုရမယ့် အကြောင်းကို ရှောင်နိုင်ကြရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတယ်။မှားခဲ့တာက မှားပြီးခဲ့ပြီ…. ဘ၀ဆိုတာက တစ်လမ်းမောင်းစနစ် ဖြစ်တဲ့အတွက် အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ ပြန်ပြင်ယူလို့ မရတော့ဘူး သေချာတယ်… ဒါဆို ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ………………”ထက်မြတ်သူတွေက နေရာမှာတင်ထိုင်ပြီး သူတို့ ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့တာတွေကို တွေးပြီး ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီထိခိုက်ဝမ်းနည်းမှုကို ဘယ်လိုဖာထေးရမလဲဆိုတဲ့ နည်းကိုပဲ သူတို့ ရှာကြမှာ ဖြစ်တယ်။” ( ရှိတ်စပီးယား)ဟုတ်တယ်……. နောက်ထပ် မမှားအောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားရမလဲ… ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကြိုးစားရမလဲ. ဘာတွေ ဆင်ခြင်ရမလဲ… ဘာ ဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲ စဥ်းစားတွေးခေါ်ရမှာပေါ့…. ပြီးခဲ့တာတွေအတွက် ထိုင်ဝမ်းနည်းနေရုံနဲ့တော့ အမှားတွေက အမှန်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး… အမှားကြောင့် သိမ်ငယ်တဲ့ စိတ်တွေကို ဖြေဖျောက်ယူလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး…….. ဘ၀နဲ့ ချီတဲ့ အမှားဖြစ်ပါစေ........ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် မမှားအောင် ထိန်းသိမ်းလို့ ရရမယ်.. ကိုယ်ရဲ့ အမှားတွေကို သေချာဆန်းစစ်... လေ့လာ ဝေဖန် ကြည့်ရမယ်... လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲ အာရုံစိုက်ရမယ်... ရည်မှန်းချက်ကို အသုံးပြုပြီး လောလောဆယ် အရေးကြီးနေတဲ့ ကိစ္စ ကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရမယ်... အတိက်မှာ မှားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေထဲကနေ သင်ခန်းစာ ထုတ်ယူရမယ်.. အမှားတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ မမှားမိအောင် လုပ်ရမယ် အနာဂတ်အတွက်... စီမံကိန်းချပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်...။ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကျဆုံးခြင်း လို့ အမြဲတမ်း ထင်မြင်နေတာတွေဟာ တကယ်တော့ ခဏတဖြုတ် အခက်အခဲတွေပါ။ ဒီအခက်အခဲတွေကို ရှုံးနိမ့်ခြင်းလို့ လက်ခံယူဆလိုက်ရင်... ဘယ်တော့မှ တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး..။ မှားခဲ့ဖူးသော အမှားတွေ... ကျဆုံးမှုတွေကို ကိုယ့်ဘ၀ အောင်မြင်မှုအတွက် လမ်းညွှန်တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးချရမယ်..။ စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ အမှားတွေ၊ အပြစ်တွေကို ခါချပြီး နင်းတက်ကာ အောင်မြင်မှုကို ရအောင်ယူရမယ်..။ ဘာအတွက်နဲ့မှ ရည်မှန်းချက်တွေကို လွှတ်မချရဘူး....... ဘာအတွက်နဲ့မှ လက်မလျှော့ရဘူး......... မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ မင်းပြောတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်အထိ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပြီပြီလဲ ဆိုတာ ပြန်မေးကြည့်လိုက်မယ်သူငယ်ချင်းတို့ရေ....အမှားတွေကို အောင်မြင်မှုအတွက် လှေကားထစ်လို အသုံးပြုဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ငါ့ကို ကျေးဇူးပြုပြီး အားပေးကြပါ... အတိက်ရဲ့ အမှားတွေထဲမှာ ကျင်လည်မနေပဲ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်မှာ အမှားထပ်မဖြစ်အောင် ငါနဲ့အတူ ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်ပါ...။頑張れ kyar yo!!!!! har jar har jar fighting!!! try try!!!! လိုက်နာတယ်ဆိုတာ ပြောသလောက် မလွယ်ဘူး … မှန်ပါတယ်..။ ဒီလို စာတွေကို ရေးတိုင်း.. ဖတ်တိုင်း ကိုယ်တိုင် လိုက်နာနိုင်လား………. ဟင့်အင်း… အမှားကတော့ မကင်းသေးဘူး။ ကင်းဖို့ထက် နည်းသွားဖို့ကို မနိုင်ရင်ကာ ကြိုးစားနေသူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒါဆိုလဲ.. အထင်ကြီး လေးစားစရာ မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စာတွေကို ဘာကြောင့်မို့ အချိန်ပေး ဖတ်မလဲဗျ ပြောနိုင်ပါတယ်..။ မတော်တဆ ဖြစ်စေ... မကောင်းတက်လို့ ဖြစ်စေ.. မျက်လုံးထဲ ၀င်လာလို့ ဖြစ်စေ.. ဖတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်ပဲ.. အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ဒီစာထဲက
သွားနေတာက ရောက်ဖို့ သေချာတယ်”
တည်ရှိတယ်လို့ ထင်ထားတာတွေက မမြဲဘူး...
မမြဲဘူးလို့ ထင်ထားတာတွေက မသေချာဘူး...
ခြေဗလာ၊ လက်ဗလာနဲ့ လာတဲ့ ဘ၀မှာ
ပလပ်စတစ် (ကလေကချေ) Posted by
တကယ်တော့ ကျွန်မဟာ မောင် မျှော်လင့်ထားသလို နူးညံ့မှု မရှိသေလာက် နည်းပါးခဲ့ပေမယ့်
အချစ်ဆိုတာက မောင် ထင်မှတ်ထားတာထက် ပိုပြီး သိမ်မွှေ့ပါတယ်။
စကားလုံးတွေ အများကြီး သုံးပြီး နှုတ်ဖျားက ဖွင့်ချမှ အချစ် မဟုတ်ဘုး
အကြည့်တစ်ချက်၊ လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့တင် တစ်သက်စာအတွက် အချစ်က ကုံလုံပါတယ်ဆိုတာ မောင် သိနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မက ချိုသာပြီး နားဝင်လွယ်တဲ့ စကားတွေ မပြောတတ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ အကြည့်တွေထဲမှာ အချစ်တို့ စီးမျှောပျော်ဝင်နေခဲ့တာ မောင်ကလဲ မြင်အောင် မကြည့်တတ်ခဲ့ဘူး။ ပြုစုယုယမှုတွေ မလုပ်တတ်ခဲ့ပေမယ့် မောင့်ကို ကိုင်ဆွဲထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ လက်တွေမှာ အားကိုးမှု၊ လေးစားမှုတို့နဲ့ ချစ်မေတ္တာတွေ အုံကျင်းဖွဲ့နေခဲ့တာ မောင် ခံစားမသိနိုင်ခဲ့ဘူး။ မောင်ရဲ့ အားနည်းချက်တို့ကို ကျွန်မ သိနားလည်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ အားနည်းချက်ကို အပြစ်တစ်ခုလို့ မောင် မြင်တတ်ခြင်းဟာလဲ ကျွန်မ မယုံကြည်ခဲ့သော ကံတရားလို့သာ သတ်မှတ်စွပ်စွဲရုံကလွဲပြီး တခြား ဘာမှတ်ချက်မျိုးမှ မပေးချင်ပါဘူး မောင်။
“မင်းရောငါပါ အစကတည်းက မချစ်သင့်ခဲ့ကြဘူးကွ” တဲ့လား။ တကယ်ဆိုတော့ သင့်တယ် မသင့်ဘူးဆိုတာ အချစ်နဲ့ သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ စကားလုံးတွေပါ မောင်ရယ်။ ကျွန်မ မောင့်ကို ချစ်သင့်တယ် ထင်လို့ ချစ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။ မောင်နဲ့ ကျွန်မဟာ ခံယူချက်မတူ ခံစားချက်ချင်းကွဲလွဲ ဦးတည်ရာအရပ်တွေ ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ သူတွေမှန်း သိသိရက်နဲ့ ချစ်မိခဲ့တာဟာ ရွေးချယ်မှုမှ မဟုတ်တာ။ ဖန်တီးယူလို့ မရသလို ဖျတ်ဆီးပစ်ဖို့လဲ ခက်ခဲတဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ မောင်နဲ့ ကျွန်မ ချစ်ခဲ့ကြတာလေ။
အချစ်ဆိုတာ ခေတ်အစဉ်အဆက်က ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပျက်သုန်းမသွားနိုင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါ၊ ကစားပွဲမဟုတ်တဲ့အတွက် အရှုံး၊ အမြတ်အနိုင်၊ အဆုံး ဘာကိုမှ သုံးစရာ တိုင်းတာစရာ မလိုပါဘူး မောင်။ ကျွန်မ မောင့်ကို ပေးလိုက်သေသာ အချစ်တို့အတွက် ပြန်ရလိုက်သောအရာတို့သည် ကျွန်မပေးလိုက်သော အချစ်တို့နဲ့ ထပ်တူမကျလို့သာ အချစ်မဟုတ်ရဘူးဆိုရင် မောင် အချစ်ကို ဘယ်လိုပုံစံ၊ နှုန်းထားမျိုးနဲ့ သတ်မှတ်သုံးစွဲနေပါသလဲ မောင်။
ကျား/မ၊ ရာထူး/ ဂုဏ်ရှိန်၊ အမည်/နာမ အားလုံးသော ၀တ်ရုံတို့ကို ဖယ်ရှားလိုက်ရင် လူဆိုတာပဲ ကျန်တာပါ မောင်ရယ်။ ကျွန်မက မောင်ဆိုသော မောင်ကိုသာ ချစ်ခဲ့တာပါ။ “မိုးထက်” ဆိုသော နာမည်ထက် မောင့်ကိုသာလျှင် ကျွန်မ ချစ်ခဲ့တာပါ။ “ဒေါက်တာ”ဟုသော ဂုဏ်ပုဒ်ထက် မောင့်ကိုသာလျှင် ကျွန်မချစ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့တွေ မပါရှိလဲ မောင်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ကျွန်မ ချစ်နေမှာပါ။
နံပါတ် 13 သို့မဟုတ် ကံမကောင်းသော ဂဏန်း
အတန်းပညာ မရှိသော တောခြုံအုံကြားမှ လူများမှ အစ၊ အတန်းပညာ မိုးထိအောင်မြင့်မားကြသော လူတန်းစားအထိအယူသီးမှုလေးများ ကိုယ်စီရှိကြသည်။ အယူသီးမှုတစ်ခုတိုင်းတွင် အခြေခံဇာစ်မြစ် ဇာတ်ကြောင်းကိုယ်စီတော့ ရှိနေကြသည်။ ပညာအဆင့်အတန်းနှင့် ဘ၀အနေအထား မည်သို့ပင် ရှိရှိ လူတိုင်းပင် တစ်ချိန်ချိန်တွင် အယူသီးမှု၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်ကြရသည်။ အချို့သော အယူသီးမှုများကို လူအများစု လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်ဖြစ်ရာ တစ်ခါတစ်လေ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာဖြင့်ပင် လွဲမှားစွာ ခံယူသည်အထိ ဖြစ်ကြရသည်။ ထို့ကြောင့် အယူသီးမှုများ၏ ဇာစ်မြစ် နောက်ခံကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး အယူသီးသင့်၊ မသီးသင့်ကို စဉ်းစားဆင်ခြင်အပ်ပေသည်။
အယူသီးမှုများအနက် ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာက တစ်ညီတစ်ညွှတ်တည်း လက်ခံထားကြသော အယူသီးမှု တစ် ခုမှာ ကံမကောင်းသော နံပါတ် (13 ) ပင်ဖြစ်သည်။
13 ဂဏန်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ကံမကောင်းစေသော ဂဏန်းအဖြစ် အယူသီးမှု၏ ဇာစ်မြစ်တစ်ခုကို ခရစ်တော်၏ နောက်ဆုံးညစာစားပွဲတွင် တွေ့ရှိရသည်။ 12 ယောက်သော သာဝကတို့ န်းရံထိုင်လျှက်ရှိသော ဆယ့်သုံးယောက်မြောက် ခရစ်တော်သည် ထိုညစာစားပွဲ၏ နောက်ရက်တွင် ကားစင်တင်ကာ ကွပ်မျက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် 13 ဂဏန်းအားကံမကောင်းခြင်းနှင့် သေခြင်းတို့၏ နိမိတ်ဆိုးအဖြစ် မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။
ဟန်ဆောင်ပြီး ပြောနေဖို့ မလိုပါဘူး မောင်။
တို့လက်တွေ ဖြေလျှော့ဖို့သာ ရှိတာပဲမို့
ကျွန်မ မျက်ရည်တို့နဲ့ အသနားမခံပါဘူး....။
နောင်တဆိုတာ ကင်းမဲ့ပါတယ် မောင်...။
ကျွန်မချစ်သော မောင် ပိုင်ဆိုင်ပါစေ........။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် သံယောဇဉ်ဆိုတာ ရှိတက်ကြတာချည်းပါပဲ။ မိသားစု သံယောဇဉ်၊ မောင်နှစ်မ သံယောဇဉ်၊ သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်၊ ချစ်သူ ရည်စားအပေါ်ထားတဲ့ သံယောဖဉ်........ နောက်ဆုံး အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးလေးတွေ ကြောင်လေးတွေ.....အတွက် သံယောဇဉ်.။ ဘယ်သူမှတော့ သံယောဇဉ်မကင်းတက်ကြပါဘူး။ အဲဒီအထဲမှာ ကိုယ်ကပဲ ပိုလို့ သံယောဇဉ်ကြီးတက်တဲ့သူ ပဲလားတော့ မသိဘူးဗျ။ အမြဲ သွားပိုးစားခံရတယ်။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်ပါပဲလို့ ပြောရမှာပါပဲ...။ လေးယောက်ပဲ ရှိတဲ့ မိသားစုလေးမှာမှ မိဘကို ဘယ်လောက်အထိ သံယောဇဉ်တွယ်လဲ ဆိုရင်......... မိဘနဲ့ ခွဲပြီး ညအိပ်ခရီးဆိုတာ တစ်ညထက်ပိုပြီးတော့ အသက်(၂၀)အရွယ်အထိ မသွားဖူးဘူး။ မသွားနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့ မိဘနဲ့ အချိန်ကြာကြာ ခွဲနေရတာ အသက်(၂၀)ကျော်မှလေ။ သုံးယောက်ပဲ ရှိတဲ့ တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးရဲ့ အောက်ထပ်မှာ ညီမလေး မသိအောင် မျက်ရည်ကျ ၀မ်းနည်းတဲ့အထိကို မိဘကို သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့တာ။ အငယ်ရဲ့ရှေ့မှာ ကိုယ်က အဲလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ထိန်းနေရပေမယ့် မေမေနဲ့ဖေဖေ့ကို လွမ်းလို့ စိတ်ဓါတ်တွေ ပြိုလဲခဲ့တာက အကြိမ်ကြိမ်။ သာမန်ဖျားတာလေးကိုတောင် ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောတက်ခဲ့တာ၊ ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်လိုဆိုတာကအစ မေမေ့ကို ပြောချင်ခဲ့တာ။ အငယ်လေးက မိဘနဲ့ခွဲနေရလို့ တစ်ခါတစ်ခါ လွမ်းတက်တာက လွဲရင် ကိုယ်လို မဖြစ်တက်ဘူးဆိုတာလဲ သိနေတယ်။ ကိုယ်ကိုက သံယောဇဉ် ကြီးလွန်းနေတယ်ဆိုတာလဲ သိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် မလျှော့နိုင်ခဲ့ဘူး။ ရလဒ်ကတော့ အိမ်ကိုပဲ ပြန်နေချင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်နေခဲ့တဲ့အတွက် သင်တန်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ မျက်ခြေပြတ်ခဲ့ရတာပဲ။
ဦးသစ်ကို နဲ့ မေးဖြစ် ဖြေဖြစ်ခဲ့တာလေးကို အမှတ်တရ ကူးတင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သစ် - ကဲ မနန်းရေ .. အမွှေလေးလို့ပဲ ပြောရင်ပြောတော့း)
ကျနော်မာတည်မှာ ရှိနေတုန်း မနန်းလဲ မာတည်မှာရှိနေတုန်း ကျနော် သိချင်တာလေးတွေ မေးချင်တယ်ဗျာ
ဟိုနေ့တည်းက မနန်းကို Request လုပ်ထားတာ .. ခု တင်လိုက်တော့ ပထမဆုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲ ပြောပါရစေဗျာ
နန်း - ရပါတယ်ရှင် ... ကဲ အဆင်ပြေသလိုသာ မွှေပါ..:)
သစ် -း) ကျနော်ကတော့ မနန်းရော ကျနော်ရော နှစ်ဦးစလုံးက ဝါသနာရှင်အဆင့်မှာပဲ ရပ်တည်နေကြသေးတယ် ဆိုတော့
ဒီအင်တာဗျူးက မေးသူနဲ့ ဖြေသူကြားမှာ မျှတမှုလေးရှိမယ်လို့တော့ မြင်မိပါတယ် ဒါပေမယ့် မနန်းကတော့ ကျနော့်ထက် ပိုမယ် ထင်တယ်နော် တခါတုန်းကပြောဖူးသလားလို့ မဂ္ဂဇင်းကို စာမူပို့ဖို့ ကြိုးစားဖူးတယ် ဆိုတာ
နန်း - အင်း ဦးသစ်ရေ... အရင့်အရင်လူတွေက ပြောတတ်ကြပါတယ်.. သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလဲ အပယ်ခံဘ၀က တက်လာတာပါ. ဒါဟာ မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့.. နန်းလဲ မဂ္ဂဇင်းကို စာမူပို့ဖို့ ကြိုးစားဖူးပါတယ် ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် နေရာပေးတဲ့ အချို့မဂ္ဂဇင်းတွေကိုပါ။ စာမူတွေကို စာအိပ်ထဲထည့် ပို့မယ်လို့ လုပ်ထားတာတွေ နန်း အံဆွဲထဲမှာ အများကြီး ရှိတယ်။ အရင်ပို့ထားတဲ့ သုံးစောင်လောက်က လုံးဝကို သတင်းမကြားရတာပါ။ နန်းဖက်က ၀မ်းစာလိုအပ်နေသေးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမယ့် နန်း ဆက်မပို့ဖြစ်တော့ဘူး အဓိကကတော့ တွန်းအားပေါ့ နန်း အပယ်ခံရတာ များလာရင် ယုံကြည်မှု ပျောက်သွားမှာ စိုးတာပါ ဒါကြောင့် 2006 နောက်ပိုင်းကစပြီး နန်း ဘယ်ကိုမှ ထပ်မပို့ဖြစ်တော့ဘူး..
သစ် - မနန်းက ကဗျာတွေအပြင် ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေလဲရေးတယ်နော်၊ ဇာတ်လမ်းတိုလို့ သုံးလိုက်လို့ စိတ်တော့မရှိနဲ့ မနန်းရေ ကျနော့်အမြင် မနန်း စကားပြေအများစုကို ဝတ္ထုတိုစာရင်းထဲ မထည့်ချင်ဘူး ဒီတော့ ကဗျာနဲ့ စကားပြေ ရေးတာ မနန်း ဘယ်ဟာကိုပို အားရမိလဲ
နန်း - ဟုတ်ပါတယ် နန်း စကားပြေပုံစံမျိုးပဲ ရေးဖြစ်တယ်။ ကဗျာထက် စကားပြေကို ပိုအားရတယ်လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်။
စကားပြေမှာက နန်းပြောချင်တာကို ပုံဖော်လို့ ရတယ်။ ကဗျာမှာကျ ဦးသစ်လို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် နန်း မရေးနိုင်လို့ပါ :)
သစ် - ဟဟ လုပ်ပီဗျာ မနန်းကတော့ ဗျူးတဲ့သူကို မေးခွန်းခက်ခက်တွေ မမေးအောင် မြှောက်လိုက်ပြန်ပြီဗျို့ ဒါပေမယ့် မရဘူးနော် ကျနော်က ရအောင်မွှေမှာ ဒါကြောင့် Gtalk တောင်ပိတ်ထားတာ တော်ကြာ ခင်ဗျား အော်နေမှာ စိုးလို့
ကဲ နဲနဲ ဆက်လိုက်ဦးမယ်၊စာရေးဖြစ်တာ အချို့က ပင်ကိုယ်ဗီဇတွန်းအားကြောင့်ရေးဖြစ်ကြတယ် အချို့ကြပြန်တော့လဲ ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုတွေအရဝေဒနာတွေဖြစ်လာလို့ ရေးဖြစ်ကြတယ် ဒီတော့ မနန်းအနေနဲ့ရော ဘယ်လိုတွန်းအားကြောင့် စာနဲ့ကဗျာကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာများလဲဗျ
နန်း - ပင်ကိုယ်ကတည်းက ဗီဇပါလာတယ်လို့ ပြောရမယ်.. နန်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်မှာ စာအုပ်အငှားဆိုင်လေး ဖွင့်တယ်ရှင့်။ သူများ သုံးတန်းကလေးတွေ စာလုံးပေါင်းဖတ်နေရတဲ့အချိန်မှာ နန်းက ၀တ္ထုတွေ ဖတ်နေပြီဆိုရင် ယုံကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ နန်းရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပေါ့လေ စာဖတ်အရမ်းသန်တယ်..။ ဖေဖေရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်မှုလဲ ပါပါတယ် သူက စာအရမ်းဖတ်စေချင်တာလေ။ နန်းရဲ့ တစ်နေ့စာဖတ်နှုန်းက တခြားသူတွေ ခန့်မှန်းထားတာထက် ပိုပါတယ်။
အဲ ဒါဆို အပြင်ပတ်ဝန်းကျင် ရိုက်ခတ်မှုအရ ဝေဒနာတွေဖြစ်လာလို့ မပါဘူးလားဆိုတော့ ပါတာပေါ့ရှင်။
နန်း ယုံကြည်တာတစ်ခုက ရင်ထဲမှာ ဘာမှ ရှိမနေရင် ချရေးလို့မရဘူး ဆိုတာပါ.. ပင်ကိုယ်ဗီဇကြောင့် စာရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် ပြင်ပဝေဒနာက ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုလို့ပဲ နန်းကတော့ ယူဆပါတယ်
သူမသည် ထိခိုက်ကြေကွဲလွယ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါရက် မုန်းမေ့ဖို့ ခဲယဉ်းသောသူ။ အချစ်ဆိုတာကို အချစ်ဆိုတာထက် ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ် မဖွင့်ဆိုတတ်သူ။ အသွေးအမွှားကအစ အရာရာကို အလေးနက်ထား ခံစားကာ ထိုလေးနက်မှုနှင့်ပင် တစ်ဖက်သူအား ၀န်ထုပ်ပိစေသူ။
သူသည် ချစ်စကားကို လွယ်လင့်တကူ မပြောတတ်သော်ငြား ကျောခိုင်းပြတ်တောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်ဆန်သူ။ အချစ်ဆိုတာကို အချစ်ဆိုတာထက် ပိုပြီး မခံစားတတ်သူ။ အရာရိာု လှစ်လျူရှု့ဖို့ ကြိုးပမ်းရင်း ထို မသိကျိုးကျွန်ပြုမှုနှင့်ပင် တစ်ဖက်သူအား ၀မ်းနည်းထိခိုက်စေသောသူ။
သူမနှင့် သူတို့၏ တွေ့ဆုံမှုမှာ သမရိုးကျ ဆန်သော သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
FriendNet ဟုသော ကဖေးဆိုင်လေးမှာ တိတ်ဆိက်ငြိမ်သက်စွာ အနားယူဖို့ အဆင်ပြေသော နေရာလေး ဖြစ်သည်။ wi fi ပေးထားသည့်အတွက် သူမအတွက် ပို၍အဆင်ပြေသည်။ ကော်ဖီကို တစ်စိမ့်စမ့် နှစ်ခြိုက်စွာ သောက်ရင်း စာရေး၊ စာဖတ်ခြင်းသည် သူမ အနှစ်သက်ဆုံးပင် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော မှန်ပြင်များမှ တဆင့် မြင်နေရသော ခြံထဲမှ သစ်ပင်များကို ကြည့်ငေးရင်း ၀တ္ထုတိုလေးများ စဉ်းစားဖန်တီးခွင့်ရသည်မှာ ဒီကဖေးဆိုင်လေးဆီ စွဲစွဲမြဲမြဲ လာနေဖို့ လုံလောက်သည့် အကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထို့နေ့က.... သူနှင့် ပထမဆုံး စဆုံသည့်နေ့က....။
ခုကိုပဲ မင်း အမုန်းမိုးတွေ ရွာတယ်
ခဏနေ အလွမ်းပန်းတွေ ပွင့်ဦးမယ်
နောက် သူစိမ်းအကြည့်တွေ နှင်းလိုကြွေမယ်
မျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်” တဲ့
ရင်ငြိမ်းပန်း(ပခုက္ကူ) Posted by
”မမသန်း နွေအေးချောင်းလေး စားချင်လို့ ၀ယ်ကျွေးစမ်းပါဟာ နော်..”
ဆေးရွက်ကြီးတွေကို တစ်ပုံစီ ပုံရင်း ရေတောက်နေသော မသန်းဦး မောင်ငယ်၏ စကားကြောင့် တွေဝေသွား ပါသည်။ အ်ိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်ကြောင့် ဒီမြို့သာပွဲကို မောင်နှစ်မနှစ်ယောက် ဆေးရောင်းလိုက်ခဲ့ရပေ မယ့် အစ်မဖြစ်တဲ့ မသန်းဦးကိုယ်တိုင်က ဆယ့်ငါးနှစ်မပြည့်တက်သေး။ ဒီမောင်ငယ်က ခုနှစ်နှစ်ခန့်ငယ်သည် ဆိုတော့ ကျောင်းနေတယ်ဆို နှစ်တန်းကျောင်းသားလောက်ပေါ့။ လူကြီးမပါ၊ ဘာမပါနဲ့ ရွာထဲက တခြား ဆေးရောင်းသူတွေကို အဖော်ပြုအားကိုးကာ လိုက်လာရပေမယ့် မသန်းဦး နည်းနည်းတော့ အားငယ် သည်။
မသန်းဦး အပျိုဖော်ဝင်ကာစမှာပဲ အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးက နောက်ဆုတ်လာသည်။ တစ်ရွာလုံး လက်ညှိုးထိုး မလွတ်သော မိခင်ကြီးရဲ့ မြေကွက်တွေလည်း ဖခင်၏ အသုံးအဖြုန်း မကွဲပြားမှုကြောင့် လုံးပါးပါးခဲ့ရသည်။ ဖခင်ကို မပြောသာလို့ မပြောရပေမယ့် မသန်းဦး ရင်ထဲတွင် အစိုင်အခဲတစ်ခုလို ဖြစ်နေသည်။ အို.. အဖေက သဘောကို ကောင်းလွန်းတာ ပါ။ တကယ်ဆို ကိုယ့်ကားပေါ်မှာ လိုက်လာတဲ့ အမျိုးသမီး သွားစရာ၊ နေစရာ မရှိတာကို အိမ်ခေါ်လာဖို့ လိုလို့လား။ သူ့သူ အရက်မူး အိပ်ပျော်နေလို့ နွားခိုးခံလိုက်ရတဲ့ ဦးချက်ဖောင်း ကိုရော နွားတစ်ကောင် ခေါ်ပေးဖို့လိုလို့လား။
ပြောရရင်တော့ အမေလည်း မထူးပါဘူး။ လူချမ်းသာတွေရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးပီပီ ဘာမှမလုပ်တက်၊ မကိုင်တက်နဲ့ အိမ်တော်စိုးတွေ စိတ်တိုင်းကျ ချယ်လှယ်တာပဲ ခံနေရတာပဲလေ။ မိုးလေးနည်းနည်းအေးတာနဲ့ ရင်ကြပ် ရောဂါထတတ်တဲ့ အဲဒီအမေက ခြင်ထောင်ထဲကနေ ဘယ်သူဘာယူသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သိမှာ လဲ။ မိသန်းဦး က သိလို့ ပြောပြန်ရင်လည်း ”ငါ့သမီးရယ် ဒီလောက်လေးနဲ့ အမေတို့ ဘာဖြစ်သွားတာမှတ်လို့ သူတို့လည်း မရှိလို့ ယူတာပေါ့ ရှိရင် ဘယ်သူက သူခိုးအဖတ်တင်ခံမှာလဲ”တဲ့။ ဟွန်း...။ သူတို့ လင်မယား ဝေသန္တရာ လုပ်လိုက်တာ ခု ငါတို့မောင်နှစ်မ ဈေးလိုက်ရောင်းရပြီ။
”အေးပါဟယ် ခဏနေပါဦး ဖိုးကြည်ရဲ့ ဒီနေ့ ဈေးဦးကို မပေါက်သေးဘူး ပြီးတော့ မမသန်း ၀ယ်ပေးပါ့မယ်”
မောင်ငယ်ရဲ့ မျက်နှာလေး ညှိုးသွားပြန်တော့လည်း သန်းဦး စိတ်မကောင်း။ ကလေးအရွယ်ဆိုတော့လည်း စားချင်တာပဲ သိတယ်မလား။ ပြီးတော့ နွေအေးချောင်းဆိုတာမျိုးက ခုလိုဘုရားပွဲလေး ဘာလေးရှိမှ စားရတတ်တာလေ။ အင်း မမသန်းလည်း ၀ယ်ကျွေးချင်တာပေါ့ မောင်လေးရယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရောက်တဲ့ သုံးရက်လုံးလုံး ရောင်းရတာက အိမ်ရောက်တာနဲ့ ဆန်ကြွေးပြန်ပေးဖို့တောင် မလောက်သေး။ ဒါတောင် ကလေးနှစ်ယောက်တည်း လာရောင်းတာမို့ ၀ိုင်းဝယ်ကြလို့ပေါ့။ မဟုတ်ရင်တော့ မိသန်းဦးတို့ ခြေဆင်းငိုဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။
မျှော်လင့်ခြင်း အကာသားနဲ့ ထုဆစ်ထားသော စိတ်ကူးများ
မင်းဟာ ငါ့ရင်ဘတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့
ငါ ဂုဏ်ယူလို့မှ မဆုံးသေးဘူး
မင်းရဲ့ သမုဒယ အမြစ်တွေနဲ့
ဒါပေမယ့် ငါလို မြေကြီးက
မင်းရဲ့ ရိုးတံပြတ်တွေ၊ ပွင့်ဖတ်ဟောင်းတွေ
မင်းအနေနဲ့ ကြင်နာမှုနဲ့ ဝေမျှပေးလိုက်တဲ့
ဒါတွေကိုကလည်း မင်းကို မြှင့်တင်ပေးမယ့်
ငါ မယုံကြည်တဲ့ ကံကြမ္မာက ငါ့ကို ခဏခဏ စိန်ခေါ်တယ်
ငါ လိုက်မသွားနိုင်တဲ့ နေရာကိုမှ သူ ရွေးခေါ်တယ်............
နားမည်မှုနဲ့ မတန်တဲ့ အပေးအယူဆန်တဲ့ လက်တွေ့တွေ
ပန်းဆိုတာက ပွင့်မြဲပွင့်နေတာပဲ ကြွေပြီးသား ပန်းအတွက် ၀မ်းမနည်းတော့ဘူး
ဒီပန်းတွေ အပွင့်ကျဲသွားပေမယ့် နောက်ပန်းတွေ ဝေလာတာပဲလေ
ပါးစပ်ကသာ ပြောနေတာပါကွာ...... အလကားပါ
မင်းရဲ့ အားငယ်တတ်တဲ့စိတ်က ငါ ငါးညှီနံ့ရရနေတယ်
တော်ပြီ ဒီတစ်ခါ အနံ့ထွက်လာရင် စဉ်းတီတုံးပေါ်သွားတင်ပစ်လိုက်မယ်
ဟုတ်တယ်. တကယ်! (စိတ်ပေါက်စွာဖြင့်)
စိတ်ကသာ ကြိုးတစ်ချောင်းဖြစ်ခဲ့ရင် အခါခါတင်းရလွန်းလို့ ပြတ်ကြာလှပေါ့
အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှု၊ ဖြေးဖြေးချင်းထုတ် မေတ္တာသာ ပွားနေလိုက် အဲဒါ အေးချမ်းတယ်
တစ်ချို့စကားတွေက ပြောလို့သာ လွယ်တာ လိုက်နာဖို့ ခက်တယ်ဗျ
စကားတွေ မပြောချင်ဘူးတိက်တိက်လေးပဲ နေချင်တယ်...။မနက်ဖြန်ကို တွေးရင်းချခဲ့မိတဲ့ သက်ပြင်းတွေကွင်းပြင်တစ်နံတစ်လျားမှာတစ်စစီ တစ်ခုစီ ပြန့်ကျဲလို့.................။တစ်ခုတည်းသောကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာမျှော်လင့်ချက် အလင်းရောင်ကလည်းမှိန်ပျအေးစက်လို့...............။ချစ်သူ့အိမ်လေးအတွက်ထားရှိခဲ့တဲ့ နှုတ်ကတိစကားတွေနဲ့ သစ္စာတရားတွေကလက်တွေ့ဘ၀နဲ့ ယှဉ်လာတဲ့အခါအားလုံးဟာ မှုန်ဝါးသွားတယ်။ရှေ့တစ်လှမ်းအတွက်နောက်နှစ်လှမ်းဆုတ်ပြီး အားယူနေရသူအဖို့တစ်နေ့တော့ ရောက်မယ့် ပုဂံဟာတကယ်ဆိုတော့ ဝေးနေသေးတယ်။မှားတဲ့ဖက်မှာ ဘယ်သူရှိလဲလို့လူပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်ကိုကိုယ်ကလွဲလို့အပြစ်ဖို့စရာရယ် မရှိဘူးလေ။သတိရခြင်းအပါအ၀င်အားလုံးကို လက်လွှတ်လိုက်ရချိန်မှာစကားတွေ မပြောချင်ဘူးတိတ်တိတ်လေးပဲ နေချင်တော့တယ်။ရင်ငြိမ်းပန်း(ပခုက္ကူ) Posted by
ကျွန်မ ရင်ဘတ်ထဲက မြန်မာအက္ခရာများ
မြန်မာအက္ခရာထဲမှာ ဗျည်း သုံးဆယ့်သုံးလုံး ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲမှာတော့ မြန်မာအက္ခရာ လေးလုံးပဲ ရှိတယ်။ အက္ခရာစဉ်အလိုက် စီထားတာမဟုတ်ဘူး။ ရင်ဘတ်ထဲကို ၀င်လာတဲ့အချိန်အလိုက် စီထားတာလို့ ပြောရင် ရမယ်ထင်တယ်။ ဘယ်လိုပဲ စီထားထားပါ ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲမှာ အက္ခရာလေးလုံး ရှိနေတာတော့ သေချာတယ်။ တ၀မ်းပူ ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲက ပထမဆုံး အက္ခရာ။ တိုမိုကိုလေး လို့ ခေါ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ညီမလေး။ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးသော လူတစ်ယောက်။ တွယ်တာစရာ ရှိတဲ့အထဲမှာမှ အတွယ်တာဆုံးသော အက္ခရာ။ ချစ်တယ်ဆိုသော သူတွေထက် ပိုချစ်ရသော သူ။ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများမှာ တ၀မ်းပူအတွက် စဉ်းစားရင်း ကြိုးစားရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာ။ မိသားစုဆိုတာတောင် ဖေဖေနဲ့ မေမေထက် ပိုလို့ တွယ်နှောင်မိတဲ့ သူ။ ခခွေး ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲက ဒုတိယ အက္ခရာ။ ချိုကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ အစ်မအရင်းသဖွယ် ချစ်ခင်ရသော သူငယ်ချင်း။ ခိုကိုးရာမဲ့တိုင်း သူ့လက်ကို ဆွဲကိုင်ထားရမှ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အထိ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သူ။ ကျွန်မ ပြုံးနေရင်တောင် နင် ဘာလို့ ငိုနေတာလဲ ဟု ဟိုးရင်ဘတ်ထဲထိ လိုက်ကြည့်ငေး မေးတတ်သူ။ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် မသိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ခံစားမှုတွေကို အလိုလို သိရှိနားလည်သူ။ နငယ် ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲက တတိယ အက္ခရာ။ နော်ကို လို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်း။ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ နေ၀င်ချိန်လို့ ပြောရမယ့် လဲပြိုချိန်၊ ကျဆုံးချိန်၊ နစ်မွန်းချိန်တွေမှာ ပြစ်တင်စကားသော်လည်းကောင်း၊ ဝေဖန်စကားသော်လည်းကောင်း အားပေးစကားသော် လည်းကောင်း တစ်ခွန်းမျှ မဆိုပဲ တိက်ဆိတ်စွာ နေပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်မကို အားအင်ဖြည့်တင်းပေးသောသူ။ အတိက်နေ့ရက်တွေမှာ နငယ်သာ ကျွန်မဖက်က မရပ်တည်ခဲ့ဖူးဆိုရင် အခုလို ကျွန်မ စာရေးနေနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ သံသယ၀င်မိတဲ့အထိ ကျွန်မအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုများသူ။ ဇကွဲ ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲက စတုတ္ထ အက္ခရာ။ ကျွန်မဘ၀တစ်သက်လုံးစာအတွက် ဝေဒနာ၊ သေရာပါမယ့်အထိ စူးနစ်လွန်းတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဒဏ်ရာ။ ဖျော့ဖျတ်လို့ မရနိုင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ မှတ်ညဏ်၊ ချန်ထားလို့ မရနိုင်တဲ့ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။ ပျော်စေလိုလဲ သူ၊ ငိုစေလိုလဲ သူ၊ ခံစားချက်အားလုံးကို သိမ်းပိုက်ထားသောသူ။ဘယ်လိုဖြစ်စဉ်မျိုးပဲ ဖြစ်လာလာ၊ ဘယ်လိုအကြောင်းရင်းမျိုးပဲ ရှိလာလာ ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲက ဒီအက္ခရာလေးလုံးကတော့ လျော့သွားလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး။ ကျန်နေသေးတဲ့ ဘ၀ရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ဒီအက္ခရာတွေရဲ့ ကူညီလမ်းပြမှုနဲ့ ဆက်လျှောက်သွားမှာမို့ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ မှတ်တိုင်တွေလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ရှင်။
တဝမ်းပူ နှင့် အမှတ်တရများ အပိုင်း -3-
နန်း ဂုဏ်ထူးတန်းအရောက်မှာပဲ တ၀မ်းပူက ပထမနှစ် စတက်ရတယ်။ မန္တလေးမြို့ရဲ့ မိန်းမလှကျွန်းလို့ သတ်မှတ်ရလောက်အောင် မိန်းကလေးကျောင်းသူများ ကြီးစိုးရာ M.U.F.L။ နန်း တစ်ခေါက်တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပေမယ့် ရှစ်တန်းကျောင်းသူ ဘ၀ကတည်းက ယူလာခဲ့တဲ့ ကျောင်းအပ်တာဝန်ကို နန်းပဲ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရတာလေ။
မြေညီထပ်က ကျောင်းသားရေးရာမှာ ဖောင်ဝယ်ဖြည့်၊ ပထမထပ်က ငွေစာရင်းဌာနမှာ ငွေသွင်း၊ ဒုတိယထပ်က ဂျပန်ဘာသာ ဌာနမှာ လက်မှတ်ထိုး..။ သုံးထပ်ကို လူးလာခေါက်ပြန်လုပ်ရင်း ကျောင်းအပ်ပြီးသွားတော့ “အငယ်လေးရေ ဒါက မေဂျာသင်ရမယ့် အခန်း၊ ဒါက မိုင်နာအခန်း၊ မိုင်နာကျရင် ဘာသာစုံကျောင်းသားတွေ လာတက်မှာနော်၊ ဒါကတော့ LAB ခန်း” ဆိုပြီး တစ်ခန်းချင်း စီ နေရာလိုက်ပြပေးနေတဲ့ နန်းကို တ၀မ်းပူလေး ပြောလိုက်တာက.........။ “မကြီး Toilet က ဘယ်နားမှာလဲ ပြပေးခဲ့ဦး” တဲ့။ အဲလို အစ်မကို နေရာတကာ အားကိုးတတ်တဲ့ တ၀မ်းပူ။
မိန်းထဲက တိုက်အမှတ် 22 မှာ အဆောင်သာ ထားခဲ့ရတာ ကလေးကို စိတ်မချဘူး။ အိမ်မှာ ဘာမှမလုပ်ဖူးတဲ့ ကလေးဆိုတော့ လေ။ နေ့တိုင်း ဖုန်းဆက်၊ တစ်ပါတ်တစ်ခါ စားစရာပို့။ တစ်လတစ်ခါ လွှဲတဲ့ငွေတောင် ဘဏ်သွားမထုတ်တတ်လို့ ဦးလေးကနေ တဆင့် လွှဲပို့ပေးရတာလေ။ အဲ...။ ပထမနှစ်ပြီးလို့ ပြန်သွားကြိုတော့ ဖေဖေ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ သားက ကားမောင်းပို့ပေးတာ။ အဲ့အစ်ကိုကြီးက တိုးတိုးလေး လာကပ်ပြောတယ်။ “အကြီးမ.. နင့်ညီမ ခြင်းထဲမှာ ဖဲထုပ်တွေ တွေ့တယ်” တဲ့။ စိတ်ပူပြီး မေးကြည့် တော့ အဆောင်က အစ်မကြီးတွေနဲ့ စက္ကူပိုက်ဆံကြေး ကစားတာတဲ့။ ဖဲချိုးတာများ တော်ရုံဖဲသမားတောင် သူလို လှအောင် မချိုးတတ်ဘူး။ အဲလို တ၀မ်းပူ။
နေ့လည်စာ ထမင်းသွားစားမယ်.. ဘယ်ဆိုင်ကောင်းလဲဆိုတော့.. “ ညီမလေးက ပုံစားဆိုင်ပဲ သိတာ” တဲ့။ မန်းလေးမှာက ထမင်း ပေါ်မှာ အသားနှစ်မျိုး၊ အရွက်နှစ်မျိုး ဟင်းတွေကို ပုံပေးပြီး ရှမ်းထမင်းဆိုပြီး ရောင်းကြ၊ စားကြတာလေ။ အစ်ကိုကြီးက ငါ ပုံစား တော့ မစားနိုင်ဘူး လို့ ပြောပြီး ဖရန့် လဖက်ရည်ဆိုင်ကို မောင်းတယ်။ အဲ့ဒီမှာ တ၀မ်းပူလေး မှာစားတာက ကြက်ကီးမား။ ကီးမား ကို ခက်ရင်းနဲ့ ဖြဲပြီး တစ်ဇွန်းစာ ပါးစပ်ထဲ သူထည့်လိုက်တယ်။ နန်း ကြည့်နေတယ်။ မျက်နှာက ရဲလာပြီး မျက်ရည်တွေ ၀ဲလို့။ “ အငယ်လေး ထွေးလိုက်လေ.. ပူသေးတယ်မလား” ပြောတယ်။ ဆိုင်ထဲမှာဆိုတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ မထွေးပဲ ဒီတိုင်း ကြိတ်ခံနေတာ အာခေါင်တွေ အပူလောင်သွားတယ်။ အဲလို တ၀မ်းပူ။
သူတို့ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်က ပွဲတော်တော်များတဲ့ ကျောင်း။ လစဉ်လတိုင်း ပွဲတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိနေတာလေ။ လေမှုတ် ပိန်ပေါင် ပြိုင်ပွဲ၊ ထမင်းနှဲထိုးပြိုင်ပွဲ၊ စက်ဘီးအနှေးစီးပြိုင်ပွဲ၊ မော်ဒယ်လ်ရှိုး၊ ခြင်းခတ်၊ သစ်ပင်စိုက်၊ ဘယ်တော့မှ မရိုးဘူး။ တစ်ရက် .. တ၀မ်းပူလေးက ပြောလာတယ်။ “မကြီး.. ညီမလေး လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲ ၀င်မလို့ ဖိနပ်ဝယ်ပေးပါ”တဲ့။ နန်း ညီမလေး က အားကစား စိတ်ဝင်စားသားပဲပေါ့..။ ဖိနပ်ဆိုင် သုံးနေရာလောက် ပြောင်းပြီး သူ့စိတ်ကြိုက် ဖိနပ်ကို ၀ယ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ ပြိုင်ပွဲက ပြန်လာရင် အဆင်သင့်စားဖို့ သူကြိုက်တတ်တာလေးတွေ ၀ယ်ပြီး နန်းက စောင့်နေတာ။
ပြန်လာတော့ စူပုတ်စူပုတ်နဲ့...။ အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ မဖြေဘူး။ ကိုရီးယားဘာသာက သူ့သူငယ်ချင်းလေးက ၀င်ဖြေ တယ်.။ နောက်ကရေရင် ဒုတိယတဲ့။ နန်းတို့ အတူတူနေတဲ့ မေကျော်အပါအ၀င် သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်ရယ်ကြပါလေရော။ စိတ်ကောက်ပြီး အပေါ်ထပ်ကို ခြေဆောင့်တက်သွားတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းမလေးက ဆက်ပြောတယ်။ “ဒါတောင် နောက်ဆုံး တစ်ယောက်က ခဏထိုင်နားလိုက်လို့ သူ့နောက် ရောက်သွားတာ”တဲ့။ သူ ရှီဆူအိုကာ မှာ ကျောင်းဆက်တက်မယ်ဆိုတော့.. ဖေဖေက ပြောတယ် နိုင်ငံခြားက ကျောင်းတွေမှာ အားကစားပါ ထူးချွန်ရတယ်တဲ့ သမီးငယ် ဘာကစားတတ်လဲတဲ့။ သူက ဖြေတယ် “ဖဲ”တဲ့။ အဲလို အားကစား ထူးချွန်တဲ့ တ၀မ်းပူ။ Posted by
တဝမ်းပူ နှင့် အမှတ်တရများ အပိုင်း -2-
တ၀မ်းပူလေးက အအိပ်မက်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှာ နန်းက ဒုတိယနှစ်လေ။ ကလေးကို ကောင်းကောင်းမောင်းတာပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒေါ်တိုမိုကိုလေး လူလည်မက ခဏ ခဏ ဖျားတယ်။ တစ်ချက်လောက် ဆူမိရင် မျက်ရည်ကျတယ်။ သူ ငိုပြီဆိုတာနဲ့ မေမေက “ နင့် ငါ့သမီးကို ဆူစရာမလိုဘူး သူ့သူ ကျက်နိုင်သလောက် ကျက်လိမ့်မယ်” ဆိုပြီး နန်းကိုပဲ မဲတာလေ။ နန်းကလဲ မေမေ လစ်ရင် လစ်သလို ခေါင်းခေါက်တယ် လိမ်ဆွဲတယ်။ အလကားနေရင်းတော့ ဘယ်ဟုတ်မှာလဲ သူ အိပ်ငိုက်ရင်တို့ စကားများရင်တို့ ပေါ့။ ညီမ၀မ်းကွဲလေး တစ်ယောက်ပါ ရှိတာဆိုတော့ သူတို့ စာကြည့်စားပွဲထိပ်မှာ နန်းက ထိုင်ပြီး ကိုယ့်စာကို ကြည့်တယ်။ သူတို့ အိပ်မငိုက်ရဲအောင်ပေ့ါလေ။
နှစ်ယောက်စလုံး နန်း ရှိတဲ့အချိန်ဆို စာကို အသားကုန်ကျက်ကြတာ။ အသံတစ်ချက်လေးမှ မလျော့ဘူး။ နန်းကတော့ ပီတိတွေဖြာလို့ပေါ့လေ။ သိပ်မကြာပါဘူး... အိပ်ငိုက်တဲ့ ပြစ်မှုနဲ့ ကလေးကို စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ အော်လိုက်တာ.. တိုမိုကိုလေးတို့ ဖျားပြန်ရော..။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ နန်းကလဲ လေးဖက်နာရောဂါ စဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ ဆေးကုဖို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ နန်းကို ရန်ကုန်ကို ပို့လိုက်ကြတယ်လေ။ နန်းလဲ မရှိရော.. ဟိုတစ်ယောက်က ရည်းစားထား၊ တိုမိုကိုလေးလဲ စပါယ်ရှယ် အိပ်။ နန်းလဲ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ စာမေးပွဲဖြေခါနီးမှကို ပြန်လာတယ်။ အောင်စာရင်းလဲ ထွက်ရော ဟိုတစ်ယောက်က အောင်ရုံ၊ တိုမိုကိုလေးက ဂုဏ်ထူးနှစ်ခုလားပါတယ်လေ။
ကျောင်းသားတို့ထုံးစံလေ ဘယ်လောက်ပဲ ပေါ့လျော့နေခဲ့ခဲ့ အချိန်တန်ရင်ကျ အမှတ်လေးက ကောင်းချင်ကြသေးတာကိုး..။ အောင်စာရင်းမှာ ဂုဏ်ထူးနှစ်ခုတည်းပါတာလို့လဲ ပြောရော.. လူကြားထဲ သတိလစ်သွားသလို ကြောင်ကြောင်ကြီး ရပ်နေတာ။ မသိရင် စိတ်ထိခိုက်သွားတာလိုလိုပေါ့လေ။ အမှန်က အစ်မလုပ်သူက ဆူမှာသိလို့ ကြိုပြီး အကာအကွယ်ယူထားတာ။ ဒါကို သိပေမယ့်လည်း နန်း က ဘယ်ဆူရက်တော့မှာလဲ။ ပြီးလဲပြီးသွားပြီလေ..။ အဲလို Defence ကောင်းတဲ့ တ၀မ်းပူ။
စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ တစ်နေကုန်အိပ်ပလိုက်မယ်လို့ စာမေးပွဲဖြေနေရတဲ့ ကျောင်းသားတိုင်း ကြိမ်းဝါးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြီးတော့ ဂိမ်းကစားချင်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တာ... များစွာနဲ့ မအိပ်ဖြစ်တတ်ကြဘူးလေ။ ဟင့်အင်း တိုမိုကိုလေးကတော့... ကြိမ်းဝါးထားတဲ့အတိုင်း အိပ်တာ။ စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ ပြန်လာတာနဲ့ အိပ်တယ်။ ညစာ ထမစားဘူး။ နောက်နေ့ မနက်ကို နေမြင့်မှ ထတယ်။ မျက်နှာလေးသစ် ထမင်းလေးစားပြီး ခဏလှဲလိုက်တာ နေ့လည် တစ်နာရီကျော်တဲ့အထိ မထဘူး။ မေမေက “ဘယ်လောက်အထိ အိပ်နိုင်မလဲ ထားကြည့်ဦးမယ်” တဲ့။ ညနေ လေးနာရီထိုးတဲ့အထိပေါ့။ “သမီး ညနေဖက်ကြီး မအိပ်ရဘူး ဖျားတတ်တယ် ခဏထဦး”ဟု ပြောကာ နှိုးယူရသည်။ ထိုသို့ နေ့ခင်းဖက်ကို တစ်နေကုန်၊ တစ်နေခမ်း အိပ်ပြီးတော့.. ညဖက်ကျ တိုမိုကိုလေး ထငိုပါလေတော့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အိပ်မပျော်လို့တဲ့။ ဘယ်ပျော်မှာလဲ တစ်နေကုန်အိပ်ထားတာကိုး။ သူက ထငိုတော့ အိမ်ကလူတွေလဲ အငြိမ်မနေရ အိပ်ရေးပျက်ရော။ နောက်ဆုံး ဖေဖေက အိမ်ကလူတွေကို မှာထားရတယ် “ သမီးငယ်ကို နေ့ခင်း ပေးမအိပ်ရ” တဲ့။
အဲလို အိပ်ရေးမက်တဲ့ တ၀မ်းပူ။
အိပ်ရာကနေ နိုးလာရင်လဲ မျက်လုံးသာ ကောင်းကောင်းမဖွင့်တာ ရေခဲသေတ္တာဆီကိုကျ ခြေလှမ်းက အမှန်။ ရေဘူးကို အရှိန်နဲ့ မော့။ ပြီး ပြောလိုက်သေးတာ အိပ်ယာထဲကို ရေပိုက်လေး သွယ်ထားရရင် ကောင်းမယ်တဲ့။ ထသောက်ရတာက အိပ်ရေးပျက်တယ်လေ။ လူနံပိန်၊ ကျွဲချိုလိမ် ဆိုတာ အားသန်တာလား အစားသန်တာလား အတိအကျ မသိပေမယ့်.. တိုမိုကိုလေးအတွက်တော့ အစားက ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ လူကောင်သေးသလောက် စားနိုင်တယ်။ သူ အကြိုက်ဆုံးက ငှက်ပျောသီး။ ငှက်ပျောတစ်ဖီးကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ စားနိုင်တာ သူပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ အဲလို အစားသန်တဲ့ တ၀မ်းပူ။
အဲလို အိပ်ရေးမက်တဲ့ တိုမိုကိုလေးတစ်ယောက် တစ်ညမှာတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ တစ်ကုပ်ကုပ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာလဲ ဘော်ကြယ်ပွင့်လေးတွေနဲ့။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်နေပေမယ့် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဆိုတာ နန်း မမေးလိုက်မိဘူး။ မနက်ဖက် နန်း အိပ်ယာနိုးတော့ နန်း ခေါင်းအုံးဘေးမှာ စာရွက်လေးတစ်ရွက် ရောက်နေတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့.. ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ဆိုတာကို ဂျပန်လို ရေးပေးထားတဲ့ စာရွက်လေး။ ဘောပင်နဲ့ ရေးထားတာ မဟုတ်ပဲ ကြိုးမျှင်လေးတွေနဲ့ ရေးထားတာလေ။ စာရွက်နောက်ကျောဖက်ကို လှန်ကြည့်တော့ .. နန်း သဘောကျတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်းကင်က ကြယ်စုလေးတွေကို ပုံဖော်ပြီး ဘော်ကြယ်ပွင့်လေးတွေနဲ့ သီထားတာ။ အဲ့သီထားတဲ့ ကြိုးမျှင်က တစ်ဖက်မှာ May4ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေး ဖြစ်နေစေတာလေ။
နန်း မျက်ရည်ဝဲမိတဲ့အထိ.. ကြည်နူးသွားတာ။ နန်း မွေးနေ့ကို နန်းကိုယ်တိုင် မေ့နေပေမယ့်.. ဆယ့်နှစ်နာရီကျော်တဲ့အထိ မအိပ်ပဲ စိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ Hand Made လုပ်ပေးထားတဲ့ တ၀မ်းပူလေး။ အဲလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တ၀မ်းပူ။
တဝမ်းပူ နှင့် အမှတ်တရများ အပိုင်း - 1 -
တ၀မ်းပူဆိုတာ နန်း ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ညီမလေးရယ်လို့ တော်တော်များများ သိထားကြမယ် ထင်ပါတယ်။ နန်းထက် သုံးနှစ်လောက် ငယ်ပေမယ့် နန်းထက် သုံးဆလောက် လည်တဲ့ ကလေးမလေးပါ။ သူရဲ့ နစ်နိမ်းက တိုမိုကိုလေး ဖြစ်တဲ့အတွက် နန်းက သူ့ကို တ၀မ်းပူ လို့ အမည်ဝှက်လေး ပေးဖြစ်ခဲ့တာ။
တ၀မ်းပူက နန်းနဲ့တော့ ပုံစံမတူဘူး။ နန်းက သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း ပေါတယ်။ စကားပြောတယ်။ ဟိုနေရာ စပ်စပ် ဒီနေရာ စပ်စပ်နဲ့။ တ၀မ်းပူမှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ ရတဲ့အထိ နည်းပါးတယ်။ ပြီး အစ်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ကပ်ပေါင်းတယ်။ စကားလည်း နည်းတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခွန်းဆို တစ်ခွန်း ထိမိအောင်တော့ ပိဿာလေး ဘေးပစ်သလို ပြောတတ်တယ်။ အနေအေးတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ သူ့အကြောင်း အမှတ်တရတွေကို စာရေးမယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးရလာတာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ။
တစ်ရက် .. နန်း တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် တီဗီရှေ့မှာ ကာတွန်းကားထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ မေမေက ရှေ့ကနေ ဖြတ်သွားရင်း စကားတစ်ခွန်း ပြောသွားတယ်။ “ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ မပြောလောက်” တဲ့။ မေမေ့နောက်ကျောကို ငေးပြီး မေ ဘာပြောသွားတာလဲ မသိဘူး ဆိုတဲ့ အတွေး ခဏ၀င်လာပြီး နန်း တီဗီပဲ ဆက်ကြည့်နေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တ၀မ်းပူက ရုတ်ချည်းဆို ထသွားတယ်။ နန်းကတော့ တီဗီကြည့်မပျက်ဘူးလေ။ ခဏနေတော့ တ၀မ်းပူရယ်လေ မုန့်ထုပ်ကြီး လက်ကဆွဲလို့ ပြန်ထွက်လာတယ်။ ဘာတွေလဲလို့ နန်းက မေးတော့.. “ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ မပြောလောက် ဓနုဖြူက ငှက်ပျောခြောက်” တဲ့။ မေမေ ပြောသွားတာကို စဉ်းစားပြီး လိုက်ရှာတာလေ။ အဲ့လို တ၀မ်းပူ။
“မမကြီး..2နဲ့2ပေါင်း ဘယ်လောက်လဲ” ”4 ပေါ့ဟ လွယ်လွယ်လေး”
အဲဒါက ပေါင်မုန့်စားချင်တဲ့ အချိန်မှာ နန်းကို မေးတတ်တဲ့ တ၀မ်းပူရဲ့ ပဟေဠိ။ အာလူးကြော်စားချင်တဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ “မှားတယ် အာလူးကြော် လေးထုပ်”။ ဖျော်ရည် သောက်ချင်တဲ့ အချိန်ဆို “မှားတယ် ဖျော်ရည် လေးဗူး”။ ငှက်ပျောသီးစားချင်တဲ့ အချိန်ဆို “မှားတယ် ငှက်ပျောသီး လေးလုံး”။ အဲလို လူလည်ကျတတ်တဲ့ တ၀မ်းပူ။
မန်းလေးမှာ ကျောင်းတက်စဉ်ကပေါ့.. နန်း နဲ့ သူ ဈေးထဲမှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ စားနေတုန်း ဆိုင်ထဲကို ကောင်လေးတွေ နှစ်ယောက်ဝင်လာကြတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ ပုံစံက ခေါက်ဆွဲပြင်တဲ့ စားပွဲကို ထိုင်ခုံတွေ ၀ိုင်းပတ်ထားတာမျိုးလေ။ အဲ့ကောင်လေးတွေ ထိုင်တဲ့နေရာက နန်းတို့နဲ့ဆို တိုင်တစ်လုံးပဲ ခြားတာ။ ကောင်လေးတွေ ၀င်လာကတည်းက တ၀မ်းပူ က နန်းကို ကာပြီး ကွယ်ကွယ်လေး နေနေတာ။ ကောင်လေးတွေကလဲ ကြည့်ကြည့် ကြည့်ကြည့်နဲ့ပေါ့။ နန်းကလဲ ဘာကောင်တွေလဲ ဆိုတဲ့ အထာနဲ့ မျက်စောင်းထိုးနေတာ။ တ၀မ်းပူကလဲ နန်းနောက်ကိုပဲ မရရအောင် ကာထားတာ။ အဲ... ကောင်လေးတွေ ထပြန်သွားတော့မှ.. “မကြီး အဲဒါ ငါတို့ အတန်းထဲက အီးစီ ” တဲ့။ စကားပြောရမှာ၊ နှုတ်ဆက်ရမှာ ကြောက်လို့လေ..။ ထို့သို့ တ၀မ်းပူ။ အမှတ်တရတွေ များလွန်းလို့ အပိုင်း ခွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နန်းမှာ ချိုကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ညီအစ်မအရင်းလို ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းပေါ့။ နန်းတို့ နှစ်ယောက်က သိပ်တော့ နူးနူးညံ့ညံ့ မဟုတ်ဘူး။ ဘောလုံးကန်လိုက်၊ ရန်ဖြစ်လိုက်၊ ဗျောက်ဖောက်လိုက်၊ ဂိမ်းဆော့လိုက် ပေါ့။ နန်းတို့ တက်တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ နောက်ဖေးအထွက် တံခါးပေါက်ဘေးမှာ မုန့်ပြားသလက် ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေး ရှိတယ်။ ဆန်မှုန့်ကို ရေနွေးနဲ့ဖောက် ထန်းလျှက်ကို ကျိုပြီး အိုးခင်းလေးထဲမှာ ထည့်ပြီး မီးဖုတ်ရတဲ့ အစားအစာမျိုးလေ။ နန်းတို့ နှစ်ယောက်က အစားလဲ ပြူးတယ်။ အိမ်က မုန့်ဖိုး ဘယ်လောက်ပေးပေး မလောက်တတ်ဘူး။ အဲ့ဒီအခါ တိုမိုကိုလေး လို့ ခေါ်တဲ့ နန်း ညီမလေးဆီကနေ ပိုက်ဆံချေးတတ်တယ် (ပြန်တော့ မဆပ်ဖူးပါဘူး ဟီး)။ အိမ်က ပိုက်ဆံတော့ မသိအောင် မယူဖူးဘူး။ မုန့်စားလို့လဲ ဘယ်တော့မှ မ၀ဘူး။ အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဆားချက်ကြတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ဆားချက်လဲဆိုတော့... နန်းက နန်းတို့အိမ်ကနေ ဆန်ကွဲ (ဇကွဲ ဟု အသံထွက်ပါရန်) နှစ်ဗူးလောက်ကို အိတ်လေးနဲ့ ထည့်လာ။ ချိုကြီးက သူ့အိမ်ကနေ ဆန်ကွဲ နှစ်ဗူးလောက်ကို အိတ်လေးနဲ့ ထည့်လာ။ ပြီး အဲ့ဒီ ဆန်ကွဲတွေကို မုန့်ပြားသလက်နဲ့ လဲစားကြတယ် ဟီး။ မီးဖိုလေးဘေးမှာ ငုပ်တုပ်လေးတွေ ကိုယ်စီထိုင်ပြီး ဆန်ကွဲနဲ့ မုန့် လဲစားခဲ့ကြတာကို ခုထိ နန်း သတိရနေမိတုန်းပါ။ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘ၀ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့။
တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ် ဟုသော စကားပုံကို လက်ခံလိုက်နာခြင်း မဟုတ်ပဲ မိမိ အလိုရှိရာ နည်းပညာနှင့် အတက်ပညာများ ပေါင်းစုဆုံရာ မြို့ကြီးတစ်မြို့ဆီသို့ ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် ဇာတိချက်ကို မြုပ်ရာ မြို့ကလေးက ထွက်ခွာခြင်းဖြင့် မြို့ပြစီးဆင်းမှုထဲ လေးနှစ်တာ ကြာအောင် ကျွန်မ စီးမျောခဲ့သည်။ ထိုလေးနှစ်အတွင်း အလိုရှိသော နည်းပညာ၊ အတက်ပညာများအပြင် လက်ခံရရှိရန် ဆန္ဒမရှိခဲ့သော စိတ်ဒဏ်ရာ၊ ကိုယ်ဒဏ်ရာပေါင်းများစွာ ကျွန်မ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မြို့ကြီးပြကြီးတွေရဲ့ တိုးတက်မှု အရေခွံအောက်က ဆုတ်ယုတ်နေသော ယိုယွင်းနေသော စာရိတ္တတွေ၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတွေ၊ ဟန်ဆောင်လိမ်ညာမှုတွေ၊ အပေါ်ယံ သဘောထားကြီးမှုတွေကြားထဲမှာ ပွင့်လင်းပြီး အရှိအတိုင်း ပြောတတ်သူ ကျွန်မ လူးလိမ့်နေအောင် အနှယ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့သို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြုံလာရသောအခါ ခေတ်မှီတဲ့ နည်းပညာ တွေ မပြည့်စုံသော်ငြားလည်း နဂိုရည်အတိုင်း မာန်မာနမထားတတ်တဲ့ မြို့ကလေးကို ကျွန်မ ပြင်းပြင်းရှရှ သတိရမိလာသည်။ ထိုသို့သောအခါ အလဲလဲအဖယ်ဖယ် တပ်ဆင်ထားခဲ့သော မျက်နှာဖုံးတို့ကို ခွာချထားလျှက် မြို့ကလေးဆီသို့ အစောတလျင် ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။
အလိုရမ္မက်ကြီးမားစွာ သူ့အား စွန့်ပစ်ထားခဲ့သော ကျွန်မကို အပြစ်တင်ငြူစူခြင်း အလျင်းမရှိပဲ မြို့ကလေးက နွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့သည်။ သူ၏ သဘောထားကြီးမှုအောက်မှာ ကျွန်မ ရှက်ရွံ့ဖို့ သတိမရလောက်အောင်ပင် မြို့ကလေးက နူးညံ့သည်၊ တင်းအိသည်။ သူ့ရင်ခွင်မှာ ပန်းလှလှတွေ ဝေဆာမနေပါ သို့သော် မြို့ကလေးမှာ နှစ်သက်ဖွယ်ရနံ့တွေ ၀န်းရံလျှက်။ ဧရာဝတီရဲ့ အနောက်ဖက်ကမ်းမှာ မေးတင်ထားတဲ့ မြို့ကလေးက နှင်းဆီတစ်ပွင့်သဖွယ် အစွမ်းကုန်ပွင့်လန်းဖို့ ရဲတင်းစွာ နီစွေးလျှက်၊ ကလေးငယ်တစ်ဦးသဖွယ် ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာ ရယ်မောမှု ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ကခုန်လျှက်၊ မြီးကောင်ပေါက်မလေးသဖွယ် ပိုင်ဆိုင်ထားသော အလှတရားတို့ကို မ၀ံ့ရဲရဲ ဖော်ပြလျှက်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ဖွံဖြိုးစ လူငယ်တစ်ယောက်လို စူးစမ်းချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ အရာရာကို ပုန်ကန်လျှက်၊ ပညာရည်ပြည့်ဝပြီးသော သက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်လို အိနြေ္ဒအပြည့်နဲ့ တည်ငြိမ်လျှက်။
ရေးခဲ့သမျှ ဇာတ်လမ်းထဲက အတိုင်း အပြင်မှာ ကြုံရလွန်းလို့ နောက်ဆို Happy Ending ပဲ ရေးဖို့ စိတ်ကူးနေပါသည်။ :PHosting ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် Post တော်တော်များများ ပျောက်ကုန်ပါသည်။ မောင်၊ သိရိ နှင့် ကျွန်မ တစ်ခုပဲ Hard copy မို့ ကျန်ရစ်ပါသည်။
ငါ့စာဖတ်၍၊မမြတ်တိုင်စေ၊ မရှုံးစေသား၊ပျင်းပြေနှစ်ခြိုက်၊ တွေးဖွယ်ထိုက်ရာတစ်ပိုဒ် တစ်လေ၊ တွေ့ငြားပေမူစာပေကျေးကျွန်၊ ငါ့ဝတ်ပျွန်ပြီငါတတ်ငါတော်၊ ငါအကျော်ဟုစာဖတ်သူပေါ်၊ ခေါင်းကို ကျော်၍ငါသော်ဆရာ၊ မလုပ်ပါတည်းတက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်
ကိုယ်ပြုသည့်ကံ ပဲ့ထင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမည်
လွန်ခဲ့သော ခုနှစ်နှစ်ခန့် 2003 ဆီက ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့ တွဲဖော်တွဲဖက် သူငယ်ချင်း လေးယောက်ဖြစ်တဲ့ မေကျော်၊ စန္ဒာ၊ အောင်လွင် နဲ့ ကျွန်မ (နန်...
ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ အမှားမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဘယ်သူပြောရ...